I-Raw Alpha GPC Powder (28319-77-9) Abavelisi-i-Phcoker Chemical
i-alpha-GPC (L-Alpha glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate) yinto yendalo ……
I-L-Alpha glycerylphosphorylcholine (i-alpha-GPC, i-choline alfoscerate) sisixhobo sendalo se-choline esifumaneka kwingqondo. Ikwayipreasympathomimetic acetylcholine eyandulelayo enokubakho kunyango lwesifo se-Alzheimer kunye nezinye isifo sengqondo esixhalabisayo.
I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) ipowder ihambisa ngokukhawuleza i-choline kwingqondo ngaphesheya kwegazi kunye nomqobo we-bietynthetic ye-acetylcholine. Yisiyobisi esinganyanzelekanga kumazwe amaninzi.
I-Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) umgubo (28319-77-9) S.uqobo
Igama lemveliso I-Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) umgubo
Sisibetho Tukushisa 0 - 4 ° C ixesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki), okanye -20 ° C ixesha elide (iinyanga).
Aukuguquka I-Choline Alfoscerate isetyenziswa kunyango lwe-Alzheimer's kunye nezinye isifo sengqondo esixhalabisayo.
I-Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ipowder (28319-77-9) Inkcazo
I-Alpha GPC ligama eliqhelekileyo le-L-Alpha glycerylphosphorylcholine, i-nootropic ye-cholinergic eyenzeka ngokwendalo kodwa inokuthathwa njengesongezelelo. I-Alpha GPC powder iyaziwa ngokukhawuleza ngokukhawuleza nangokuthembekileyo ukuhambisa i-choline kwingqondo ekudalweni kwe-neurotransmitter acetylcholine.
I-Raw Alpha GPC (iCholine Alfoscerate) ipowder (28319-77-9) Indlela yokusebenza?
benefits Ye-Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) umgubo (28319-77-9)
Kunconywe i-Raw Alpha GPC (iCholine Alfoscerate) ipowder (28319-77-9) Isistim
Imiphumela Ye-Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) umgubo (28319-77-9)